Hymns Bhaibheri mune rimwe gore Ndima yeZuva Misoro Tsvaga Enzanisa nemaBhaibheri Recently Read Akachengetedzwa Zvikamu Mavhidhiyo Mepu / Nguva / Atlas
Pinda pakutanga Mufundisi Rumbidzo Dhoneta Taura nesu Apps Bhaibheri Dzvene (XML / Audio) Zvirongwa
Found 307 ~ Mateu, Marku, Ruka, ዮሐንስ, Apostlagärningarna, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
Uku ndiko kuberekwa kwakaitwa Jesu Kristu. Amai vake Maria vakanga vachangoroorwa naJosefi. Vasati vagara vose Maria akaonekwa ava napamuviri nesimba raMweya Mutsvene.
Paakanga achiri kufunga izvi, hoyo mutumwa waTenzi akazviratidza kwaari mukurota achiti, “Josefi mwanakomana waDhavhidhi usatye zvako kutora Maria mukadzi wako nokuti pamuviri paanapo akapaita nesimba raMweya Mutsvene.
Hongu ini ndinokuombekai nemvura kuti mupinduke. Asi arikuuya mushure mangu ane simba kupinda ini. Ini handikodzeri kutakura shangu dzake; iye achakuombekai naMweya Mutsvene uye nomoto.
Ndipo paakabvuma. Jesu paakangoombekwa akabva abuda mumvura pakarepo ndokubva matenga akazaruka kwaari akaona Mweya waMwari achiburuka akaita senjiva achisvikomhara paari. Hero izwi rakabva kudenga
Ipapo Jesu akatungamirirwa naMweya kuenda murenje kundoedzwa naSatani.
Mukurumbira wake wakapararira neSiria yose. Vakaunza kwaari varwere vose vakanga vachirwara nezvirwere zvakasiyana — siyana namamwewo marwadzo navakanga vakagarwa nemweya yakaipa, navaiva netsviyo navakanga vane mitezo yomuviri yavo yakafa akavarapa.
“Vakakomborerwa zvavo varombo mumweya nokuti umambo hwedenga ndohwavo.
Pazuva iroro, vazhinji vachanditi, ‘Tenzi Tenzi, hatina here kuporofita muzita renyu, tikadzinga mweya yakaipa muzita renyu, tikaita mabasa anoshamisa muzita renyu?’
Manheru acho, vanhu vakauya kuna Jesu navanhu vazhinji vakanga vakagarwa nemweya yakaipa. Akadzinga mweya iyoyo nokungotaura nomuromo chete. Akaporesawo vose vakanga vachirwara.
Paakasvika kumhiri kuya, kunyika yavaGadhara. Akasangana navarume vaviri vaiva nemweya yakaipa vachibva mumakuva. Vaityisa zvikuru zvokuti hapana munhu aikwanisa kupfuura nenzira iyoyo.
Mweya yakaipa iya yakamukumbira kuti kana watidzinga, tidzingire mudanga renguruve.
Vafudzi vakati ware kutiza. Pavakandopinda muguta vakataura zvose nezvakanga zvaitika kuna vakanga vakagarwa nemweya yakaipa.
Pavakabva ipapo, pakauiswa munhu aiva mbeveve akagarwa nomweya wakaipa.
Mweya wakaipa pawakaburitswa, mbeveve iya yakataura. Gungano rakashamiswa richiti, “Hakuna kumboonekwa zvakadai muIsiraeri.”
Jesu akadaidza kwaari vadzidzi vake gumi navaviri akavapa simba pamusoro pemweya yetsvina kuti vaidzinge nesimba rokurapa zvirwere zvose namatenda ose.
Rapai vanorwara, mutsai vakafa, murape vana maperembudzi mudzinge mweya yakaipa. Makapiwa pachena, imi ipaiwo pachena.
nokuti zvamuchataura muchazvipiwa panguva iyoyo, nokuti hamusirimi munenge muchitaura asi Mweya waBaba venyu anenge achitaura nemamuri.
Musatye avo vanouraya muviri asi vasingagoni kuuraya mweya asi ityai uyo anogona kuuraya mweya nomuviri mugomba romoto.
nokuti Johani akauya asingadyi kana kunwa asi vanhu vakati ano mweya wakaipa.
“Tarirai muone muranda wangu wandakasarudza, wangu chaiye wapamwoyo wandinofarira. Ndichaisa Mweya wangu paari iye achaparidza kutonga kwakarurama kune vechirudzi.
Kwakauiswa kwaari bofu raive mbeveve rine mweya wakaipa akariporesa zvokuti mbeveve iya yakataura ikakwanisa kuona.
Zvino kana ndichidzinga mweya yakaipa noMweya waMwari, saka umambo hwaMwari hwatosvika pamuri.
Naizvozvo ndinokutaurirai kuti, chitadzo chipi nechipi zvacho nokushonha Mwari kupi nokupi zvako kunoregererwa vanhu, asi kushonha Mweya hakuregererwi.
Uyo anotaura chinhu chakaipa nezvoMwanakomana womunhu acharegererwa asi uyo anotaura zvakaipa nezvaMweya Mutsvene haaregererwi, muupenyu huno kana muupenyu huchauya.
“Kana mweya wakaipa wabuda mumunhu, unopfuura nomunzvimbo dzisina mvura uchitsvaka pokuzororera, asi unopashaya.
Ipapo unobva waenda wondounza mimwe mweya minomwe yakaipa kupinda iwo. Inopinda yogara imomo. Mhedziso yomunhu iyeyo inoipa kupinda pokutanga. Ndizvo zvichaitika kuchizvarwa chino ichi chakaipa.”
Hoyo mumwe mudzimai wechiKanani, womudunhu iroro, akauya achichema achiti, “Ndinzwireiwo tsitsi, Tenzi, Mwanakomana waDhavhidhi; mwanasikana wangu akagarwa zvakanyanya nomweya wakaipa.”
Jesu akamukarira, mweya wakaipa ukabva wabuda maari. Mukomana akabva arapwa pakarepo.
Iye akati kwavari, “Ko sei Dhavhidhi, afemerwa naMweya Mutsvene, anomuti Tenzi paanoti,
Rindirai munamate kuti murege kupinda mukuedzwa. Mweya unoda zvawo asi nyama yaneta.”
Naizvozvo endai mundodzidzisa marudzi ose avanhu muvaombeke muzita raBaba neroMwanakomana neraMweya Mutsvene
nokuti achava mukuru pamberi paTenzi; haachazonwi waini kana doro rinodhaka, achazadzwa naMweya Mutsvene kubvira achiri munhumbu maamai vake.
Achafamba pamberi paTenzi aina mweya nesimba raEriya kuti awadzanise madzibaba navana vavo; nokudzorera vasingateereri kuhungwaru hwavakarurama, kuti nhadzirire Tenzi vanhu vakamugadzirira.”
Mutumwa ndokumupindura achiti, “Mweya Mutsvene achakuburukira, simba roWokumusorosoro richakufukidza. Naizvozvo mwana wauchapona achanzi mutsvene, Mwanakomana waMwari.
Erizabheti akabva azadzwa naMweya Mutsvene,
“Ini ndinokurumbidzai, Tenzi, nemwoyo wangu wose, mweya wanguwo unopembera norufaro Mwari Muponesi wangu.
Zvino baba vake Zakariya, vakazadzwa naMweya Mutsvene vakaporofita vachiti,
Mwana akazokura akasimba mumweya. Aigara murenje kusvikira zuva raakazviratidza kuvaIsiraeri.
Zvino muJerusaremu maiva nomumwe murume ainzi Simeoni. Akanga ari munhu akarurama anotya Mwari, uye akanga achitarisira kunyaradzwa kweIsiraeri. Mweya Mutsvene akanga ari paari.
Munhu iyeyu akanga aziviswa naMweya Mutsvene, kuti haazofi asati aona Mesia waTenzi.
Afemerwa naMweya, akapinda muTemberi. Vabereki zvavakauisa mwana Jesu kuzomuitira zviya zvaigaroitwa zviri muMutemo
Johani akavapindura vose achiti; “Hongu, ini ndinokuombekai nemvura, asi ane simba kupfuura ini ari kuuya. Ini handikodzeri kusunungura rukanda rweshangu dzake. Iye achakuombekai naMweya Mutsvene uye nomoto.
Mweya Mutsvene, aine muviri unenge wenjiva, akaburukira paari; izwi ndokubva kudenga richiti, “Iwe ndiwe Mwanakomana wangu wapamwoyo ndiwe unondifadza zvikuru.”
Zvino Jesu, azere naMweya Mutsvene, akadzoka achibva kuna Jorodhani. Akatungamirirwa naMweya mugwenga
Zvino Jesu akadzokera Garirea ava nesimba raMweya; mukurumbira wake ukapararira kwose kwose munharaunda iyoyo.
“Mweya waTenzi uri pandiri nokuti akandizodza kuti ndiparidze shoko rakanaka kuvarombo. Akandituma kuti ndizivise nhapwa zverusununguko rwadzo namapofu zvekusvinudzwa kwawo, nokupa rusununguko kuna vakadzvinyirirwa,
Musinagogu imomo maiva nomunhu aiva nomweya wakaipa wetsvina. Akazhamba nezwi guru achiti;
Jesu akaukarira achiti, “Chibva wanyarara ubude maari.” Kuzoti mweya wakaipa uya wambomurigira pasi, vose vachizviona; wakabuda maari usina kumbomukuvadza.
Vanhu vose vakashamiswa kwazvo, vakataurirana vachiti, “Ishokoi iri? Nokuti anoudza mweya yakaipa nechiremera nesimba, ichibva yabuda.”
Mweya yakaipa yakabuda muvazhinji ichidaidzira ichiti, “Iwe, ndiwe Mwanakomana waMwari.” Asi Jesu akaikarira asingaibvumiri kutaura nokuti yaiziva kuti iyeyu ndiye Kristu wacho.
vakanga vauya kuzonzwa zvaaitaura nokuporeswa matenda avo. Uye vakanga vachitambudzwa nemweya yakaipa vakaporeswa.
Nenguva yakareyo Jesu aiporesa vazhinji vaiva nezvirwere namatenda, achidzinga mweya yakaipa; achisvinudzawo mapofu mazhinji.
“Nokuti Johani Muombeki akauya asingadyi chingwa kana kunwa waini, imi mukati, ‘Ane mweya wakaipa.’
pamwechete namamwe madzimai akanga aponeswa kumweya yakaipa nokuzvirwere. Paiti Maria ainzi Magadharena akabviswa mweya yakaipa minomwe
Paakangoti achiti budei mugwa akasangana nomunhu aibva muguta iroro aiva nomweya wakaipa. Kwenguva ndefu akanga asingapfeki hanzu. Akanga asingagari mumba asi aigara kumakuva.
Chikonzero ndechokuti Jesu akanga ati mweya wetsvina ubude mumunhu iyeyo nokuti kazhinji mweya wakaipa waimugara. Aigara akatochengetedzwa akasungwa nengetani namajoti asi aidambura zvisungo izvozvo achitinhirwa kurenje nomweya wakaipa.
Ipapo Jesu akamubvunza kuti, “Zita rako ndiani?” Iye akati, “Ndinonzi Hondo” nokuti mweya yakaipa yakawanda yakanga yapinda maari.
Mweya yakaipa yakabuda mumunhu uya ikapinda munguruve dziya. Danga riya rakati ware roteremuka napamawere marefu ndiye rove rove mugungwa kunyura.
Vanhu vakabuda kundoona zvakanga zvaitika. Vakauya kuna Jesu vakawana munhu uya makanga mabuda mweya yakaipa, akagara pasi patsoka dzaJesu akatopfekawo uye pfungwa dzake dzava pamwechete. Vakatya.
Avo vakanga vazviona vakavataurira kuti uya akanga akagarwa nemweya yakaipa akaporeswa sei.
Murume uya akabviswa mweya yakaipa akakumbira kuti arambe ainaye, asi Jesu akamuti aende zvake achiti,
Mweya wake wakadzoka akamuka pakarepo. Jesu akati ngaapiwe chimwe chinhu chokudya.
Jesu akadaidza vane gumi navaviri akavapa simba noukuru pamusoro pemweya yose yakaipa nesimba rokurapa zvirwere.
Zvino mweya unongomubata obva ava kuzhamba uchimugwigwinisa kusvikira ava kupupa furo. Unomurwadzisa usingambomusiya.
Paakanga achiuya, mweya wakaipa wakamurigira pasi ukamupfurupfutisa. Jesu akatsiura mweya wetsvina akaporesa mukomana uya akamupa kuna baba vake.
Johani akadavirawo woti, “Tenzi takaona munhu achidzinga mweya yakaipa muzita renyu tikamurambidza nokuti haasi wenzira imwechete nesu.”
Vadzidzi makumi manomwe vakadzoka norufaro vachiti, “Tenzi, kunyange mweya yakaipa yava pasi pedu muzita renyu.” Asi Jesu akati kwavari, “Ndakaona Satani achiwa semheni inobva mudenga.
Zvakadaro zvazvo musafarire izvi zvokuti mweya yava pasi penyu asi farirai kuti mazita enyu akanyorwa kudenga.”
Panguva imwecheteyo Jesu akafara kwazvo aina Mweya Mutsvene akati, “Ndinokutendai, Baba, Tenzi wedenga napasi kuti makavanza zvinhu izvi kuna vakachenjera navanonzwisisa mukazvizivisa kuvana vaduku. Hongu Baba aya madiro enyu akanakisa.
Iye akapindura achiti, munoti “Ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose nemweya wako wose nesimba rako rose nepfungwa dzako dzose uye ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.”
Zvino kana imi vaipi kudai muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu; ko kutozoti Baba vokudenga, vanopa zvakadii Mweya Mutsvene kuna vanomukumbira.”
Jesu paaidzinga mumwe mweya wakaipa waiva mbeveve mweya wakaipa uya pawakabuda, mbeveve iya yakataura uye vanhu vakashamiswa.
Asi vamwe vavo vakati anodzinga mweya yakaipa naBherizebhuru jinda romweya yakaipa.
Zvino kana ndichidzinga mweya yakaipa nomunwe waMwari umambo hwaMwari hwasvika pamuri.
“Kana mweya wakaipa wabuda mumunhu unopfuura nomunzvimbo dzisina mvura uchitsvaka pokuzororera. Kana washaya nzvimbo unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabva.
Ipapo unobva waenda wondounza mimwe mweya minomwe yakaipa kupinda iwo. Inopinda yogaramo. Mhedziso yomunhu iyeyo inoipa kupinda pokutanga.”
Munhu wose anotaura zvakaipa nezveMwanakomana womunhu acharegererwa. Asi uyo anoshonha Mweya Mutsvene haaregererwi.
nokuti mweya Mutsvene achakudzidzisai panguva iyoyo zvamunofanira kutaura.”
Ipapo ndichazviti kumweya wangu, mweya une zvinhu zvakawanda zvichachengeteka kwamakore mazhinji. Nyatsogara zvako udye uchinwa uchinyatsofara zvako.”
Asi Mwari akati kwaari, “Iwe benzi, ihwo usiku huno uchanzi tipe kuno mweya wako. Zvinhu zvawakazvigadzirira zvacho zvichava zvaani.
Maiva nomumwe mudzimai aiva nomweya wakamuitisa ndonda kwamakore gumi namasere. Akanga akakombama asingagoni kuzvitwasanudza.
Iye akati kwavari, “Endai mundotaurira gava iroro kuti, ‘Ndiri kudzinga mweya yakaipa ndichaporesa nhasi namangwana, pazuva retatu ndobva ndapedza basa rangu.’
Jesu akadaidzira nezwi guru akati, “Baba ndinoisa mweya wangu mumaoko enyu.” Apedza kutaura kudaro akabva afa.
Pane zvokuera kwemweya wake, iye Jesu Kristu Tenzi wedu, akanzi Mwanakomana waMwari pasimba pamusana pokumuka kwaakaita kuvafi.
Ndinodisisa kwazvo kukuonai kuti ndikupei chipo chezvomweya kuti chikusimbisei
Asi kuna vavo vano mweya wokupanduka vasingateereri chokwadi vanotungamirirwa nouipi; chavo kutsamwirwa nokuitirwa zvehasha.
MuJudha chaiye muJudha ari muJudha mukati; saizvozvowo kudzingiswa kwechokwadi chinhu chomumwoyo chezvomweya kwete chokutevedza zvakanyorwa chete. Kurumbidzwa kwake kunobva kuna Mwari kwete kuvanhu.
Chitarisiro hachitinyengedzi nokuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumwoyo yedu naMweya Mutsvene watakapiwa.
Asi iye zvino takasunungurwa kumutemo. Kune chinhu chiya chakanga chakatibata uranda, tave vanhu vakafa, zvokuti hatichashanda tiri pasi pomutemo wakare wakanyorwa asi muupenyu hutsva hwaMweya.
Tinozviziva kuti mutemo ndewezvemweya asi ini ndiri munhu wenyama. Ndakatengeswa kukamwoyo kokuda kutadza.
nokuti muna Kristu Jesu mutemo waMweya woupenyu wakandisunungura kumutemo wechitadzo noworufu.
Izvi zvakaitirwa kuti zviri pamwero zvinodiwa nomutemo zvizadzikiswe matiri isu tisingagari upenyu hwenyama asi upenyu hwomweya
nokuti vanogara upenyu hwenyama pfungwa dzavo dziri pazvinhu zvenyama asi vanogara upenyu hwomweya pfungwa dzavo dziri pazvinhu zvomweya.
Kutorwa mwoyo nezvinhu zvenyama rufu. Asi kuisa mwoyo wako kune zvomweya upenyu norugare
Asi imi hamusipo kuzvifadza nyama yenyu. Imi muina Mweya Mutsvene, kana Mweya waMwari ari mamuri zvechokwadi. Ani nani asina Mweya waKristu, haasi wake.
Asi kana Kristu ari mamuri, kunyange miviri yenyu yakafa nokuda kwechitadzo, mweya yenyu mipenyu pamusana poururami.
Kana Mweya waiye akamutsa Jesu muvafi achigara mamuri, iye akamutsa Kristu Jesu kuvakafa achapa upenyu kumiviri yenyu inofa nokuna iyewo Mweya anogara mamuri.
nokuti ukagara upenyu hwenyama, uchafa asi kana ukauraya, naMweya, zviito zvomuviri uchararama.
Vose vanotungamirirwa naMweya waMwari vana vaMwari
nokuti hamuna kugamuchira mweya wouranda kuti mupindezve mukutya asi makagamuchira Mweya wokuti muve vana. Ndiye anotigonesa kudaidza tichiti, “Abha, Baba.”
Iye Mweya pachake anopupurirana nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari.
Hazvisi zvisikwa zvoga asi kana iyesuwo tine zvipo zvokutanga zvaMweya, tinogomera mukati medu, tichimirira kuti titorwe savana kuri iko kununurwa kwemiviri yedu.
Ndizvozvowo naMweya, anotibatsira muutera hwedu nokuti hatizivi kuti tinofanira kunamata sei. Asi Mweya pachake anotinamatira achitura femo rakadzama zvisingatauriki.
Iye Mwari anoongorora hana dzavanhu anoziva zviri mupfungwa dzaMweya nokuti iye Mweya anonamatira vakarurama maererano nezvinoda Mwari.
Ndinotaura chokwadi muna Kristu, handirevi nhema uye hana yangu iina Mweya Mutsvene inondipupurira
Naizvozvo ndinokukumbirisai, hama dzangu, pamusana petsitsi dzakaitwa naMwari, kuti mupire miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene chinofadza Mwari; ndiko kunamata kwezvomweya ikoko.
Rambai uri moto moto pakushandira Mwari; muchinganduma naMweya Mutsvene; shandirai Tenzi.
nokuti umambo hwaMwari haurevi chokudya kana chokunwa asi hunoreva ururami norugare nokufara muna Mweya Mutsvene.
Dai Mwari wechitarisiro angokuzadzai norufaro rwose norugare mukutenda kwenyu, kuti nesimba raMweya Mutsvene mangofashukira nechitarisiro.
chokuti ndiri mushandiri waKristu Jesu ndichishanda mukati mevechirudzi uye kuti ndiri mushandiri weShoko Rakanaka raMwari. Ibasa rangu somupristi kupira vechirudzi kwaari sechibayiro chinofadza chakaereswa naMweya Mutsvene.
nesimba rezviratidzo nezvishamiso uye nesimba raMweya Mutsvene. Uku kuri kuti kubvira kuJerusaremu kutenderera nokuIririkumu ndiparidze shoko raKristu, ndichiita kuti ive ndiyo vavariro yangu yokuparidza Shoko Rakanaka kusati kwakambodomwa Kristu.
Ivo ndivo zvavo vakafarira kuzviita. Asi zviripowo zvazvo ndezvokuti, vanofanira kubatsira varombo ivavo. Nokuti vaJudha vakagoverana zvikomborero zvomweya nevechirudzi saizvozvowo vechirudzi vanofanira kubatsira vaJudha nezvinhu zvenyama.
Ndinokukumbirisai hama dzangu, nokuna Tenzi wedu Jesu Kristu, nokurudo runobva kuna Mweya Mutsvene, kuti muvavarire pamwechete neni muminamato yenyu kuna Mwari muchindinamatira
1 VaKorinte 1:7
zvokuti hapana chipo chezvomweya chamusina pamunenge makamirira kuratidzwa pachena kwaTenzi wedu Jesu Kristu.
1 VaKorinte 2:4
Shoko rangu nokuparidza kwangu zvakanga zvisiri zvokupwisa vanhu namazwi oungwaru asi kuratidza Mweya nesimba
1 VaKorinte 2:10
Izvozvo ndizvo zvaakatizivisa nokuna Mweya, nokuti Mweya anotsvagurudza zvose kunyange zvinhu zvoudzamu hwaMwari.
1 VaKorinte 2:11
Ndiani angazive zviri mupfungwa dzomunhu kusiya mweya womunhu iyeyo uri maari. Saizvozvowo hapana angazive pfungwa dzaMwari kusiya Mweya waMwari.
1 VaKorinte 2:12
Zvino hatina kugamuchira mweya wapanyika asi Mweya anobva kuna Mwari kuti tizive zvipo zvatinopiwa pachena naMwari.”
1 VaKorinte 2:13
Hatitauri izvi namazwi atinodzidziswa noungwaru hwavanhu asi atinodzidziswa naMweya tichitsanangura zvinhu zvechokwadi zvomweya kuna avo vana Mweya.
1 VaKorinte 2:14
Munhu asina Mweya haakwanisi kugamuchira zvipo zvaMweya Mutsvene waMwari nokuti ndezvoupenzi kwaari, uye haagoni kuzvinzwisisa nokuti zvinogona kunzwisiswa nomunhu ana Mweya.
1 VaKorinte 2:15
Munhu anaMweya anogona kunzwisisa zvose sezvazviri asi iye hapana anogona kumunzwisisa zvaari.
1 VaKorinte 3:1
Kana iniwo, hama dzangu, handina kukwanisa kutaura kwamuri savanhu vana Mweya asi savanhu venyama uye savacheche muna Kristu.
1 VaKorinte 3:16
Handiti munoziva kuti muri Temberi yaMwari here uye kuti Mweya waMwari anogara mamuri?
1 VaKorinte 5:5
munofanira kuturira munhu iyeyo kuna Satani kuti muviri wake uparadzwe kuti mweya wake uponeswe nezuva raTenzi Jesu.
1 VaKorinte 6:11
Ndizvo zvakanga zvakaitawo vamwe venyu asi makashambidzwa mukaitwa vatsvene, mukaruramiswa muzita raTenzi Jesu Kristu uye muna Mweya waMwari wedu.
1 VaKorinte 6:17
Munhuwo anobatana naTenzi anova mweya mumwechete naye
1 VaKorinte 6:19
Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene ari mamuri anobva kuna Mwari? Hamusirimi muridzi wezvamuri.
1 VaKorinte 7:33
Munhu ane mwoyo miviri. Mukadzi asina kuroorwa kana kuti mhandara, ano shungu nezvaTenzi kuti ave mutsvene mumuviri nomumweya.
1 VaKorinte 7:40
Asi sokuona kwangu angatova munhu akakomborerwa zvake akaramba ari zvaari izvozvo. Ndinofunga kuti ndina Mweya waMwari.
1 VaKorinte 9:11
Zvino kana takadyara zvinhu zvakanaka zvomweya pakati penyu kungave kunyanyisa here tikakohwa zvimwe zvinhu zvenyu?
1 VaKorinte 10:3
Vose vakadya chokudya chezvomweya; vose vakanwa chokunwa chezvomweya nokuti vakanwa padombo rezvomweya raivatevera.
1 VaKorinte 10:20
Kwete, zvandiri kureva ndezvizvi zvokuti zvavanopira vanopira kumweya yakaipa kwete kuna Mwari. Ini handidi kuti mudyidzane nemweya yakaipa.
1 VaKorinte 10:21
Hamunganwi mukombe waTenzi nomukombe wemweya yakaipa. Hamugoni kudya patafura yaTenzi muchizondodyirawo patafura yemweya yakaipa.
1 VaKorinte 12:1
Panyaya yezvipo zvaMweya, hama dzangu, handingadi kuti munge musingazivi.
1 VaKorinte 12:3
Naizvozvo ndinoda kuti munzwisise kuti hapana munhu anotaura ainaMweya waMwari kuti Jesu ngaave norushambwa. Hapanawo angati Jesu ndiTenzi iye asina Mweya Mutsvene.
1 VaKorinte 12:4
Kune mhando dzakasiyana — siyana dzezvipo asi anozvipa ndiye Mweya mumwecheteyo.
1 VaKorinte 12:7
Mune mumwe nomumwe munoonekwa kuti muna Mweya Mutsvene anoshanda maari kuti zvibatsire ruzhinji.
1 VaKorinte 12:8
Mumwe anopiwa, nomuna Mweya Mutsvene, kutaura noungwaru; mumwewo achipiwa kutaura noruzivo zvichibva kuna Mweya mumwecheteyo;
1 VaKorinte 12:9
mumwewo chipo chechitendero chinobva kuna Mweya mumwecheteyo. Mumwewo chipo chokurapa chinopiwa naMweya mumwecheteyo.
1 VaKorinte 12:10
Kuno mumwe chipo chokuita zvishamiso; kuno mumwewo chipo chokuporofita; mumwewo achipiwa chipo chokusiyanisa mweya yakaipa neyakanaka; kuno mumwewo chipo chokutaura nendimi dzakasiyana — siyana; mumwewo chipo chokududzira ndimi.
1 VaKorinte 12:11
Zvose izvozvi zvinofemerwa naMweya mumwecheteyo anogovera munhu nomunhu sokuda kwake.
1 VaKorinte 12:13
Chikonzero ndechokuti nokuombekwa kwatakaitwa naMweya mumwechete, tose takaombekwa mumuviri mumwechete, vangave vaJudha kana kuti vaGiriki, vangave varanda kana vasununguki tose takanwa Mweya mumwechete.
1 VaKorinte 14:1
Rudo ngaruve ndicho chinangwa chenyu muvavarire kwazvo kuwana zvipo zvomweya zvikuru kuti muporofite.
1 VaKorinte 14:2
Chikonzero chacho ndechokuti anotaura norurimi rusingazivikanwi haatauri kuvanhu asi kuna Mwari nokuti hapana anomunzwisisa asi anotaura zvakavandika muna Mweya.
1 VaKorinte 14:12
Ndizvo zvimwechete nemi, zvamunodisisa kuona zvinhu zvinoratidza kuti Mweya Mutsvene aripo, vavarirai kuvaka sangano.
1 VaKorinte 14:14
nokuti kana ndichinamata norurimi rusingazivikanwi, mweya wangu unonamata, asi pfungwa dzangu hadziwane muchero mazviri.
1 VaKorinte 14:15
Ko zvino ndoita sei? Ndichanamata nomweya uye ndichanamatawo nepfungwa dzangu. Ndichaimba nemweya wangu asi ndichaimbawo nepfungwa dzangu,
1 VaKorinte 14:16
nokuti ukatenda nemweya ko munhu asina kuzvidzidza angati, “Ameni” sei kumunamato wako wokutenda iye asingazivi zvauri kutaura?
1 VaKorinte 14:32
Muporofita anofanira kuzvibata nemweya waanenge anawo pakuporofita,
1 VaKorinte 14:37
Kana kune mumwe anofunga kuti muporofita kana kuti munhu wezvemweya, anofanira kuona kuti zvandiri kukunyorerai mutemo waTenzi.
1 VaKorinte 15:24
Ndipo panozouya magumo panenge Kristu oturira umambo kuna Mwari Baba apedza kuparadza mweya mikuru mikuru youshe neyoukuru neyavanamasimba.
1 VaKorinte 15:44
Chinodyarwa somuviri unobatika asi chinomutswa chava muviri womweya.
1 VaKorinte 15:45
Zvino kana pano muviri unobatika kuno muviriwo womweya. Ndizvo zvakanyorwa zvichinzi munhu wokutanga, Adhamu akava chinhu chipenyu; Adhamu wokupedzisa akava mweya unopa upenyu.
1 VaKorinte 15:46
Asi hausi womweya unotanga asi unobatika kozoteverwa nowomweya.
2 VaKorinte 1:22
Akaisa rupawo rwake patiri akatipa Mweya wake mumwoyo medu sorubatso.
2 VaKorinte 3:3
Imi pachenyu munotoratidza kuti muri tsamba inobva kuna Kristu, muchero webasa redu, isina kunyorwa neingi asi naMweya waMwari mupenyu. Haina kunyorwa pamafendefa amatombo asi pamafendefa emwoyo yavanhu.
2 VaKorinte 3:5
Hazvirevi kuti tinokwanisana nazvo pachedu kuti titi isu zvinobva kwatiri. Kukwanisa kwedu kunobva kuna Mwari akatiita kuti tikwanise kuva vashandiri vechitenderano chitsva chisina kunyorwa asi chomweya.
2 VaKorinte 3:6
Nokuti chakaitwa zvokunyorwa chiya chinouraya asi Mweya anopa upenyu.
2 VaKorinte 3:8
ko kutozoti zvaMweya zvinopenya zvakadii?
2 VaKorinte 3:17
Zvino Tenzi wacho ndiMweya. Pana Mweya waTenzi pano rusununguko.
2 VaKorinte 3:18
Isu tose takabviswa jira riya, mbiri yaTenzi inopenya matiri uye tiri kusandurwa tichitodzana naye, kupenya kwedu kuchingoramba kuchikurakura nokuti izvi zvinobva kuna Tenzi, Mweya.
2 VaKorinte 4:13
Zvino zvatino mweya mumwechetewo wechitendero wakanga uine uyo akanyora achiti, “Ndakatenda ndikataura, saizvozvo,” isuwo takatenda tinotaura saizvozvo
2 VaKorinte 5:5
Iye akatigadzirira izvi ndiMwari akatipa Mweya sorubatso.
2 VaKorinte 6:6
uye tinoratidza izvi noutsvene noruzivo nokutirira nomutsa naMweya Mutsvene norudo rwechokwadi
Zvatiine zvitsidzo izvi hama dzangu ngatizvichenesei kune zvose zvinon'oresa muviri kana mweya uye hutsvene hwedu huve hwakaruramisisa mukutya Mwari.
2 VaKorinte 11:4
Ndinodaro nokuti kana mumwe munhu akauya achiparidza mumwe Jesu akasiyana newatakaparidza muchigamuchira mumwe mweya wakasiyana newamakagamuchira kana kuti mukagachira Shoko Rakanaka rakasiyana neremakagamuchira muri kutomugamuchira namaoko maviri.
2 VaKorinte 12:18
Ndakakurudzira Titosi kuenda ndikamutumira neimwe hama yedu. Titosi akakunyengedzerai here? Hatina here kushanda nomweya mumwecheteyo tichitevera gwara rimwechete?
Ndingade kumbokubvunzai izvi chete zvokuti iyemi makagamuchira Mweya pamusana pezvisungo zvomitemo here kana kuti nokudavira zvamakanzwa?
Kuzungairai kwakadai? Vanhu vakatangisa muMweya, ndimi mavakupedzesera munyama here?
ko iye anokupai Mweya Mutsvene achiita zvishamiso pakati penyu, anozviita pamusana pezvisungo zvomutemo here kana kuti nokunzwa nechitendero?
Izvi zvakaitirwa kuti muna Kristu Jesu, chikomborero chaAbhurahamu chiuyewo kune vechirudzi kuti tigamuchire chivimbiso chaMweya nechitendero.
Ndizvozvowo zvinesu, pataiva vana vaduku takanga tiri varanda vemweya yomudenga'mu nezvapasi pano.
Pamusana pokuti muri vana, Mwari akatuma Mweya woMwanakomana wake mumwoyo yedu watinokwanisa naye kudaidza tichiti, “Abha, Baba.”
Asi zvino, pamavakuzivana naMwari, kana kuti pamavakuzivikanwa naMwari, mungapindukire seizve kumweya yezvinhu zvisina simba uye isina chayo yamavakuda kuva varanda vayozve.
Sapanguva iyoyo, uya akaberekwa maererano nenyama akatambudza uyo akaberekwa maererano naMweya. Ndizvozvo nanhasi.
Nokuna Mweya Mutsvene uye nechitendero, isu tinotarisira kururamiswa kwatiri kumirira.
Zvandinoreva ndezvizvi, zvokuti tungamirirwai naMweya murege kufadza havi dzomuviri
nokuti zvinodiwa nomuviri zvinorwisana nezvinodiwa naMweya. Zvinodiwawo naMweya zvinorwisana nezvinodiwa nehavi dzomuviri nokuti izvi zviri zviviri zvinorwisana zvichikutadzisai kuita zvamunoda.
Asi kana muchitungamirirwa naMweya hamuchisiri pasi pomutemo.
Asi Mweya anobereka muchero wokuti tive norudo norufaro norugare, tive nemwoyo murefu nomutsa nemwoyo wakanaka nokutendeka
Kana Mweya ari iye anoita kuti tirarame; saizvozvo ngatichitungamirirwawo naMweya.
Hama dzangu, kana mumwe wenyu apindwa nokukanganisa kwakadii zvako, imi vanamati, vanaMweya, mudzorei zvakapfava zvinyoro asi muchizvichenjererawo nokuti imi mungadaro mukaedzwawo.
Munhu anodyara zvinonangana nomuviri wake, mumuviri iwoyo anozokohwamo kuora kwawo. Anodyarawo zvinonangana nemweya wake anokohwawo mumweya wake upenyu usingaperi.
Ngaarumbidzwe Mwari naBaba vaTenzi wedu Jesu Kristu akatikomborera muna Kristu; akatikomborera namakomborero ose ezvomweya okumatenga.
Zvino, kana imiwo, muna Kristu, makanzwa shoko rechokwadi neShoko Rakanaka roruponeso rwenyu, mukatenda maari, makaiswa rupawo rwaMweya Mutsvene wechivimbiso.
Mweya Mutsvene ndiye rubatso rwenhaka yedu kusvikira taiwana, mbiri yaMwari ichibva yarumbidzwa.
“Dai Mwari waTenzi wedu Jesu Kristu, Baba vembiri vangokupai Mweya woungwaru anozarurira vanhu kuti mumuzive
muchitevedza maitiro apanyika pano muchiteverawo changamire womweya inesimba iri mumhepo, mweya uri kushanda muvanhu vasingateereri.
nokuti nokwaari uye naMweya mumwechete tinowana masvikiro kuna Baba.
Maari imiwo makavakwa mairi kuva nzvimbo yokugara yaMwari muna Mweya.
zvisina kuziviswa kuvanhu mune zvimwe zvizvarwa sokuziviswa kwazvakaitwa naMweya iye zvino kuna vapositori vake vatsvene navaporofita
kuitirawo kuti nomusangano, ungwaru hwaMwari hwakasiyana — siyana huratidzwe zvino kune mweya mikurukuru neino ushe yomumatenga.
Ndinonamata kuti kubva muupfumi hwavo hune mbiri akusimbaradzei nesimba nokuna Mweya, umunhu hwenyu hwomukati
muine shungu dzokuchengetedza Mweya wokubatana kwamakaita makasunganidzwa norugare.
Kunongova nomuviri mumwechete naMweya mumwechete sokudaidzirwa kwamakaitwa chitarisiro chimwechete pamakadaidzwa.
muvandudzwe patsva mumweya nomupfungwa dzenyu,
Muregewo kutsamwisa Mweya Mutsvene waMwari nokuti ndiye wamakapiwa naye rupawo kuitira zuva reruponeso.
uye musararadze newaini nokuti unzenza hwakapfuuridza ihwohwo, asi ini zadzwai naMweya.
Tauriranai muchiimbirana nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchiimba muchiita mumhanzi kuna Tenzi nemwoyo yenyu yose
nokuti hatisi kurwisana navanhu asi nomweya ine ukuru ukuru, neino ushe nemweya inotonga pasi pose pano pane rima riripo iri uye tiri kurwisana nehondo nehondo dzomweya youipi iri mumatenga'mu.
Dzikai mumusoro ruponeso senguwani muine bakatwa raMweya zvichireva Shoko raMwari.
Namatai nguva dzose muina Mweya. Itai minamato nemikumbiro. Nechikonzero ichochi garai makangwaririra musingamborasa mwoyo muchikumbirira vatsvene vose.
nokuti ndinoziva kuti neminamato yenyu uye norubatsiro rwaMweya waJesu Kristu ndichanunurwa.
Zvino kana imi muine chinokukurudzirai muna Kristu, muine rudo runokugadzanisai mwoyo, muina Mweya uye muine rudo nomutsa,
chiitai kuti ndinyatsofara nokuva nomwoyo mumwechete kwenyu muchidana zvimwechetezvo, muchinzwana muine mweya mumwechete.
nokuti isu ndisu vedzingiso yechokwadi, vanonamata Mwari muMweya uye tinovimba naKristu Jesu. Hativimbi nezvinoitwa panyama
iye akatizivisawo rudo rwamakawana muna Mweya.
Naizvozvo kubvira musi watakazvinzwa hatimborega kukunamatirai tichikumbira kuti muve noruzivo ruzere rwezvaanoda muungwaru nokunzwisisa kwezvomweya
Ngwarirai kuti pasave nomunhu anokuitai chinhu chokutamba nacho achisevenzesa ungwaru nounyengedzi husina maturo achitevedza magamuchidzanwa avanhu uye achitevedza zvemweya yapanyika asingatevedzi zvaKristu.
Kana makafa pamwechete naKristu kunezvemweya yenyika munogarirei sokunge muri venyika, munozviisirei pasi pemitemo inoti,
Shoko raKristu noupfumi hwaro ngarinyatsoti tindindi mamuri muchidzidzisana nokurairana noungwaru muchiimba nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchitenda Mwari mumwoyo menyu.
nokuti Shoko redu Rakanaka rakauya kwamuri, kwete zvepamuromo chete asi nesimba naMweya Mutsvene uye nechivimbo chizere. Imi munoziva kuti takaratidza kuti tiri vanhuyi zvataiva pakati penyu tichizviitira imimi.
1 VaTesaronika 1:6
Imi makatitevedzera mukatevedzerawo Tenzi nokuti makagamuchira shoko irori muri munhamo huru asi makarigamuchira norufaro muchifemerwa naMweya Mutsvene,
1 VaTesaronika 4:8
Naizvozvo munhu anoramba izvi haasi kuramba vanhu asi ari kuramba Mwari anopa Mweya Mutsvene wake kwamuri.
Musadzimure Mweya Mutsvene.
Iye Mwari worugare pachake ngaakuitei vatsvene muna zvose zvamuri akuchengetei zvakanaka mutumbi wose unoti, mweya nemwoyo nomuviri zvisina chinoshoreka pazviri pakuuya kwaTenzi wedu Jesu Kristu.
2 VaTesaronika 2:2
kuti musabva mapengereka nazvo kana kuita manyawi nazvo zvichibva kumweya kana kushoko kana kutsamba zvinoita sezviri kubva kwatiri zvichiti zuva raTenzi rasvika.
2 VaTesaronika 2:13
Isu tinosungirwa kutenda Mwari pamusana penyu, hama dzangu vadiwa vaTenzi nokuti Mwari akakusarudzai kubvira pakutanga kuti muponeswe nokuitwa vatsvene naMweya nokutenda muchokwadi.
Tinopupura kuti zvakavandika zvechitendero chedu zvikuru kwazvo zvokuti: akaonekwa akaratidzwa pachena aine muviri akapembedzwa naMweya akaonekwa navatumwa akaparidzwa kumarudzi akatendwa pasi pose akazokwira kudenga aine mbiri.
Mweya Mutsvene anotaura pachena kuti pamazuva okupedzisira vamwe vachakanda pasi chitendero pamusana pokuteerera mweya inonyengedza nezvidzidziso zvemweya yakaipa
Chengetedza chokwadi chakaiswa mumaoko ako naMweya Mutsvene anogara matiri.
nokuvandudzwa naMweya Mutsvene waakawodzworera matiri nokuna Jesu Kristu Mununuri wedu
Handiti Mweya yose inebasa rokushanda here? Yakatumwa kuti indoitira basa avo vose vachazogara nhaka yoruponeso here?”
Mwari akarupupurirawo nezvioneso, nezvishamiso, nezviratidzo, zvorudzi norudzi nezvipo zvaMweya Mutsvene zvaaipa samadiro ake.
Naizvozvo sokutaura kwaMweya Mutsvene anoti: “Nhasi kana monzwa izwi rake,
Shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rinopinza kupinda bakatwa ripi neripi zvaro romuchekakose. Rinobaya zvokupinda mukati — kati chaimo richisvika pakarundana munhu nemweya wake: richisvikawo pakasangana nhengo nomwongo. Rinopatsanurawo pfungwa nezvinovavarirwa nemwoyo.
Nokuti hazvikwanisiki kudzora vanhu vakambovhenekerwa, vakaravira chipo chedenga, vakagoveranawo Mweya Mutsvene,
Ichi ndicho chitsigiro chomweya chezvirokwazvo, chitarisiro chinopinda munzvimbo tsvene iri seri kwejira rokudzikatirisa,
Namamiriro ezvinhu akadai, Mweya Mutsvene anoratidza kuti nzira inopinda muNzvimbo Inoeresesa haisati yazarurwa kana tendhe yokunze ichiripo.
ko kutozoti ropa raKristu asina chinoshoreka akazvipira nokuna Mweya nyakugara aripo, rinochenesa zvakadii hana dzenyu kubva kumabasa akafa kuti mushandire Mwari mupenyu.
Mweya mutsvene anotipupurirawo paanomboti,
Asi isu hatisi vaya vokudzokera shure vanoparadzwa asi isu tiri vanhu vane chitendero vanoponesa mweya yavo.
Chimwewo ndechokuti tina vanababa vapasi pano vaitiranga asi isu taingovaremekedza. Ko isu hatingatozviisa zvakatonyanya here pasi paBaba vezvemweya kuti tirarame.
uye kuungano yamatangwe akanyorwa kudenga nokumutongi ari Mwari wavose nokumweya yakanaka yakaruramiswa
Teererai vatungamiriri venyu muchizviisa pasi pavo nokuti vari kufudza mweya yenyu savanhu vachazozvidavirira kana vobvunzwa. Regai vaite izvi vachifara, kwete vakasuwa nokuti hazvina zvazvinokubatsirai.
Naizvozvo bvisai zvetsvina zvose nezvakawandawanda zvakaipa mugamuchire makazvidukupisa shoko rakadyarwa mamuri rinokwanisa kuponesa mweya yenyu.
Unotenda kuti Mwari mumwechete unoita zvakanaka. Kunyange mweya yakaipa inotendawo kudaro ichitodedera.
Nokuti ndizvo zvakaita muviri, kana usina mweya wakafa; saizvozvowo chitendero chisina mabasa chakafa.
Kana kuti munofunga here kuti Magwaro Matsvene anotaura pasina paanoti, “Mwari anorwadziwa mumwoyo neshanje pamusoro paMweya waakati agare matiri
ngaazive kuti ani nani anodzora mutadzi mukurasika kwake gwara achaponesa mweya wake kurufu uye zvitadzo zvizhinji zvichafukidzwa.
Somubayiro wechitendero chenyu, munowana ruponeso rwemweya yenyu.
Vakatsvagisisa nozvomunhu iyeyo uye nezvenguva yakaratidzwa naMweya waKristu mavari pavaifanotaura nezvedambudziko raKristu nembiri yaizotevera.
Zvakaratidzwa kwavari kuti vakanga vasingazvishandiri asi vaishandira imi muzvinhu zvamakataurirwa navaiparidza kwamuri Shoko Rakanaka nokuna Mweya Mutsvene akatumwa kubva kudenga. Vatumwa vaitosuwira kuona zvinhu izvozvo.
Zvino zvamakachenesa mweya yenyu nokuteerera kwenyu chokwadi kuti muve norudo rwechokwadi kune vehama; idanai zvechokwadi nemwoyo wose.
1 Petro 2:2
Savacheche vatsva vachangoberekwa suwirai mukaka chaiwo wezvemweya kuti nawo mukure kusvika kuruponeso.
1 Petro 2:5
imiwo uyai samatombo mapenyu muvakwe kuva Temberi yemweya, muve vapristi vatsvene kuti nokuna Jesu Kristu mupire zvibayiro zvemweya zvinogamuchirika pana Mwari nokuna Jesu Kristu.
Vadikanwi ndinokukurudzirai savauyi navatorwa kuti musiyane nehavi dzomuviri dzinorwisana nemweya wenyu.
nokuti makanga muchitetereka sehwai asi iye zvino makadzokera kuMufudzi noMuchengeti wemweya yenyu.
Runako rwenyu ngaruve rwohunhu hwakavandika rwomumwoyo nechishongo chisingaparari chomweya wakapfava worunyararo wakakosha kwazvo pana Mwari.
nokuti Kristu akafira zvitadzo chakamwe, munhu akarurama achifira vasina kururama kuti atiunze kuna Mwari. Mumuviri akauraiwa, mumweya akamutswa.
Muupenyu hwomweya ihwohwo akaenda akandoparidza kumweya yaiva muusungwa
1 Petro 4:6
Ndokusaka Shoko Rakanaka rakaparidzwa kunyange kuvakafa kuitira kuti kunyange vakatongwa vaine muviri savanhu, vagare mumweya saMwari.
Kana mukanyombwa pamusana pezita raKristu makakomborerwa nokuti Mweya wembiri, Mweya waMwari ari pamuri.
nokuti hakuna chiporofita chakangouya chichingonyuka zvacho mumunhu. Asi kuti vanhu vakafemerwa naMweya Mutsvene vakataura zvinobva kuna Mwari.
2 Petro 2:8
nokuti mururami uyu zvaakaona nezvaakanzwa paaigara mukati mavo akashungurudzwa zuva nezuva mumweya wake wakarurama pamusana pezviito zvavo zvisina murao.
1 Johani 2:27
Mweya Mutsvene wamakazodzwa naye, anoramba ari mamuri. Hazvichisina basa kwamuri kuti muve neanokudzidzisai, nokuti iye wamakazodzwa naye anokudzidzisai uye ndewechokwadi ari pachokwadi haarevi nhema sokukudzidzisai kwaakakuitai, rambai muinaye.
1 Johani 3:24
Vose vanochengeta mitemo yake vanogara vakabatana naye iyewo akabatanawo navo. Izvi ndizvo zvinotizivisa kuti iye akabatana nesu, zvokuti akatipa Mweya Mutsvene.
1 Johani 4:1
Vadikanwi regai kungotenda mweya wose wose, asi edzai mweya iyoyo muone kuti inobva kuna Mwari here nokuti vaporofita venhema vazhinji vapararira nenyika.
1 Johani 4:2
Zvamunoziva nazvo Mweya waMwari ndezvizvi: Mweya wose unopupura kuti, Jesu Kristu akauya nomuviri, ndowaMwari.
1 Johani 4:3
Mweya wose usingapupuri izvozvi nezvaJesu, hausi waMwari. Uyu ndiwo mweya wemhandu yaKristu wamakambonzwa kuti uri kuuya iye zvino watova pasi pano.
1 Johani 4:6
Isu tiri vanhu vaMwari, anoziva Mwari anotiteerera, asiri waMwari haatiteereri. Izvozvi ndizvo zvinotiratidza mweya wechokwadi nomweya usiri wechokwadi.
1 Johani 4:13
Zvatinoziva nazvo kuti tigere takabatana naMwari uye kuti Mwari agere abatana nesu ndezvizvi zvokuti iye akatipa Mweya wake.
1 Johani 5:6
Jesu Kristu ndiye akauya nemvura neropa kwete nemvura chete asi nemvura neropa. Mweya ndiye chapupu nokuti Mweya ndiye chokwadi.
1 Johani 5:8
zvinoti Mweya neropa nemvura. Zvose zviri zvitatu zvinowirirana.
3 Johani 1:2
Mudikanwi, ndinonamata kuti dai waro zvinhu zvose zvangokufambira zvakanaka uye kuti uve noutano hwakanaka. Ndine chokwadi chokuti pane zvomweya wako, muchete.
Vanhu ivavo imharadzi dzavanhu, vanhu venyika vasina Mweya.
Asi imi hama dzangu ibvai mazvivaka pachitendero chenyu chinoera kwazvo kwazvo. Namatai muina Mweya Mutsvene.
Ndaiva naMweya pazuva raTenzi ndikanzwa necheshure kwangu kurira kukuru kunenge kwebhosvo
uyo ane nzeve ngaanzwe zviri kurehwa naMweya kumasangano. Uyo anokunda ndichamupa mvumo yokudya muti woupenyu uri muparadhiso yaMwari.’
Ane nzeve ngaanzwe zviri kutaurwa naMweya kumasangano. Uyo anokunda, rufu rwechipiri haruna charunomuita.
Ane nzeve ngaanzwe zviri kutaurwa naMweya kumasangano. Uyo anokunda ndichamupa imwe mana yakavanzika. Ndichamupawo dombo jena nezita idzva rakanyorwa padombo iroro, zita risina anoriziva, kusiya iyeyo chete anenge arigamuchira.
Ane nzeve ngaanzwe zviri kurehwa naMweya kumasangano.”
“Nyorera mutumwa wesangano rokuSadhisi “Mazwi ouyo ane mweya minomwe yaMwari uye ane nyenyedzi nomwe uti: ‘Ndinoziva mabasa ako, une kambiri kokunzi uri mupenyu asi iwe wakafa.
Ane nzeve ngaanzwe zviri kurehwa naMweya kumasangano.’
Ane nzeve ngaanzwe zviri kurehwa naMweya kumasangano.
Ane nzeve ngaanzwe zvinorehwa naMweya kumasangano.”
Pakarepo ndakanga ndazadzwa naMweya onei chigaro choumambo chakati dzi kumira mudenga nomumwe akanga akagara pachiri.
Pachigaro choumambo chiya paipenya mheni nokudhiriridza namabhanan'ana. Pamberi pechigaro choumambo paibvira mwenje minomwe yomoto. Iyoyo ndiyo mweya minomwe yaMwari.
Ipapo ndakaona Hwayana ichitarisika seyakambouraiwa; yakanga yakamira nechapakati pechigaro choumambo yakatenderedzwa nezvisikwa zvipenyu zvina zviya uye navakuru vakuru vaya. Yakanga iine nyanga nomwe namaziso manomwe. Ndiyo mweya minomwe yaMwari yakatumwa pasi pose.
Paakakwatanura namo yechishanu, ndakaona pasi peatari mweya yavanhu vakaurairwa shoko raMwari nouchapupu hwavakaita.
Vamwe vanhu vose vakasara vaya, vasina kuuraiwa namatenda iwayo havana kuregera rubatabata rwavo rwuya rwokunamata mweya yakaipa nokunamata zvifananidzo zvendarama nezvesirivha nezvendarira nezvamatombo nezvemiti zvisingakwanisi kuona kana kunzwa kana kufamba.
Asi mushure memazuva aya matatu ane chidimbu mweya woupenyu unobva kuna Mwari uchavapinda vachizomira namakumbo avo kutya kukuru kuchizowira vanovaona.
Chakabvumidzwa kupa chifananidzo chechikara chiya mweya unofema zvokuti chifananidzo chechikara chaitogona kutaura. Uye kuti vanenge vasina kugwadama vachinamata chifananidzo chechikara vauraiwe.
Ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti, “Nyora izvi zvokuti: ‘Vakakomborerwa vanofira muna Tenzi, kubvira zvino zvichienda mberi.’ “Vakakomborerwa zvechokwadi, ndozvinotaurwa naMweya. Vachazorora pamabasa avo, nokuti zviito zvavo zvinovatevera.”
Ndakaonawo mumuromo mezigaranyanya riya nomumuromo mechikara chiya uye nomumuromo womuporofita wenhema muchibuda mweya mitatu yakaipa yakaita samatatya.
Iyoyi mweya yakaipa inoita zvishamiso inofamba nenyika yose kumadzimambo apasi pano ichivakokorodzera hondo yapazuva guru raMwari Samasimbaose.
Ndiina Mweya mandiri akaenda neni kugwenga ndikaona mukadzi akatasva pachikara chitsvuku chakanga chazara namazita okushonha Mwari chakanga chiine misoro minomwe nenyanga gumi.
Vane mweya wechirwirangwe uye vakapa simba ravo noukuru hwavo kuchikara.
Akadaidzira nezwi guru achiti, “Raparara, raparara Bhabhironi guta guru rava musha wemweya yakaipa; rava dambiro remweya yose yakan'ora nechirugu cheshiri dzose dzakan'ora necheshiri dzisingadiwi navanhu.
Ipapo ndakabva ndati pasi gwadagwa patsoka dzake ndichimupfugamira. Asi iye akanditi, “Rega kudaro, ini ndiri mushandipamwe newe uye ndiri mushandipamwe nehama dzako dzino uchapupu hwaJesu. Mwari ndiye waunofanira kupfugamira uchimunamata; uchapupu hwaJesu ndiwo mweya unavaporofita.”
Zvino ndakazoona zvigaro zvoumambo. Vakanga vagere pazviri ndivo vakapiwa simba rokutonga uye ndakaonawo mweya yavavo vakanga vadimburwa musoro pamusana pokupupurira kwavo Jesu uye pamusana peshoko raMwari uye pamusana pokuti havana kunamata chikara kana kunamata chifananidzo chacho kana kuiswa mucherechedzo wacho pahuma dzavo kana pamaoko avo. Vakamukazve vakatonga naKristu kwechiuru chamakore.
Ndiina Mweya, akanditakura akaenda neni kuGomo refurefu akandiratidza guta dzvene reJerusaremu richiburuka richibva mudenga, richibva kuna Mwari
Mutumwa akati kwandiri, “Mazwi aya mazwi anovimbika uye ndeechokwadi Tenzi Mwari wemweya yavaporofita akatuma mutumwa wake kuti azoratidza varanda vake zvichaitika zvino uno.”
Mweya nemwenga vanoti, “Uya.” Anenge azvinzwa ngaati, “Uya.” Anenge ane nyota ngaauye; anoda ngaatore zvake mvura youpenyu pasina muripo.